Amanyathelo amathandathu okukhuthaza ukuyila | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amanyathelo amathandathu okukhuthaza ubuchule bokuyila
Enye yezona ziphambili iimpawu abanazo okanye ekufuneka benazo abaqulunqi begraphic, ngokuqinisekileyo bubuchule bokwakha. Nangona kunjalo, Umsebenzi omninzi owenziwa ngabaqulunqi begraphic isekwe kusetyenziso lobuchule, isifundo, ukuzinikela kunye nokuvavanywa, kodwa ngaphandle kwento yokuba nenkuthazo kunye negalelo elikhulu lokuyila liya kuthi libaluleke.
Nangona kuyinyani ukuba kukho abantu abaliqela abanobuchule obuthile besebancinci kakhulu, oko kubonisa ukuba ixesha elininzi yinto enomdla kakhulu, kunjalo kuyinyani ukuba ubuchule bokufunda bunokufundwa kwaye buvuselelwe. Ukuba ngamanye amaxesha uyakholelwa ukuba ugqibe ngento nganye enokwenzeka kwaye okomzuzwana uzive ubambekile ngokupheleleyo, ungakhathazeki, kuba Kukho iindlela ezithile zokukhuthaza amandla akho okudala kwaye emva koko siza kukuxelela ukuba ziyintoni na.
1 Qiniseka kwinto oyenzayo
2 Uvavanyo kunye nenkqubela phambili
3 Sebenza, sebenza kwaye uqhubeke usebenza
4 Khuthazwa ngabanye abayili
5 Ndibambekile, andikwazi ukugxila
6 Yabelana ngezimvo zakho nabanye abayili
Qiniseka kwinto oyenzayo
Ingabonakala ngathi iyinto eqhelekileyo, nangona ufuna njalo ukubheja ngokungaboniyo kulo msebenzi okanye kwiprojekthi Uya kuyiphumeza, ngale ndlela ungayinika i-100% yakho. Ukugxila ekuzinikeleni nakuwo onke amandla akho kwinto oyenzayo kubalulekile, kuba ngale ndlela izimvo zinokuvela ngokulula.
Uvavanyo kunye nenkqubela phambili
Ngaphakathi kwindawo yakho yokuthuthuzela, akukho nto iya kuze ikhule, ke kuyafuneka ukuba uphume kuloo mngxuma kwaye uqale ukukhangela ubuqu kwindawo eyahlukileyo ngokupheleleyo, apho unako. yenza imisebenzi ongakhange uyenze rhoqo. Vula ingqondo yakho kumava amatsha kwaye ube nobuganga bokubona izinto ngendlela eyahlukileyo, naka ingqalelo kwiinkcukacha ezincinci nezikhulu zayo yonke into ekujikelezileyo, mhlawumbi ngale ndlela uya kuba nakho ukuyifumana ngokulula kwaye nalapho ungayilindelanga kwaphela isitshixo kunye nenkuthazo oyifunayo ukwenza umsebenzi wakho.
Sebenza, sebenza kwaye uqhubeke usebenza
Ngelixa kuyinyani ukuba kuvela ukuba kulungile kakhulu ukuphuma ukuze ufumane izimvo ezintsha kunye neembono ezahlukeneyo, Inkuthazo yokwenene iza ngokwenene ngelixa usemsebenzini. Ke ngoku ujolise ngakumbi kule nto uyenzayo, kokukhona uya kufumana amathuba izimvo kunye nobuchule bokuyila ufuna kangakanani
Khuthazwa ngabanye abayili
Asithethi ukuba ukhuphela umsebenzi womnye umntu, kodwa ukuthatha inkuthazo, oko kukuthi, unokwenza izimvo zakho zisekwe kwezinye ezindala, Yenza amanqaku kunye nezalathiso ezikuvumela ukuba ubumbe umbono wokugqibela de ube unayo into oyifunayo. Gcina ukhumbula ukuba abona titshala babalaseleyo kunye nabaziwayo kwezobugcisa kwimbali nabo baqala ukufunda kwabanye ootitshala.
Ndibambekile, andikwazi ukugxila
Ukuba uzifumana ngelo xesha apho uziva ngathi ubambekile, ungakhathazeki kwaye uphefumle; thatha ixesha lokuphuma phandle ukolula ingqondo yakho kwaye uphumle ngokwenza umthambo omncinci, uhambe, okanye wenze enye into oyithandayo kwaye ikuncede ekuphazamiseni emsebenzini okomzuzwana. Ingqondo ifuna ukuphumla ukuze ikwazi ukufumana amandla; Okukhona uxinezelekile, kokukhona uya kufumana izisombululo ezimbalwa.
Yabelana ngezimvo zakho nabanye abayili
Izimvo zakho zinokuba ngokuchanekileyo isemthethweni kwaye inika umdla Abanye abayili, ke awunakuze ube madolw 'anzima xa usabelana noogxa bakho kwaye ngale ndlela uyila indawo yeengcali apho banokuthi batyebisane khona ngenxa yemibono emitsha kunye negalelo kubantu abanolwazi.
Uyilo ihlala ivela kuwe, yamava akho, umbono wakho malunga nezinto ezikungqongileyo kunye nobomi. Wonke umntu unokuba nobuchule bokuyila, nangona kunjalo, kwezinye iimeko kuyimfuneko ukwenza iinzame kwaye uzame ukuqonda izinto kwiimbono ezintsha ezingaziwa ngokupheleleyo, ukuze ufumane ulwazi oluninzi ngakumbi nolungokoqobo.
Ixesha ledinga elingagqibekanga kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyibeka kwiiprojekthi zakho kunye nokuzinikezela okubeka kuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amanyathelo amathandathu okukhuthaza ubuchule bokuyila